गुल्मी तनावग्रस्त, भाको के हो? के छ ताजा अवस्था? यस्तो छ बिशेष अडियो रिपोर्ट – Gulmiews
गुल्मी तनावग्रस्त, भाको के हो? के छ ताजा अवस्था? यस्तो छ बिशेष अडियो रिपोर्ट
१ पुष २०७३, शुक्रबार १७:३४ सन्जु काउछा मगर
प्रहरी र बन्दकर्ताबीच झडप भएपछि गुल्मी सदरमुकाम तम्घास बजार यतिबेला तनावग्रस्त भएको छ । आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगाएको ताला प्रहरीले खुलाउन खोज्दा दुबै पक्षबीच झडप भएको हो । झडपमा नेकपा मालेकी सांसद कमला विकसहित दुई दर्जन आन्दोलनकारी घाइते भएका संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले करिब दुई दर्जन अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । आक्रोशित आन्दोलनकारीले दुईवटा सवारी साधनमा आगजनी समेत गरेका छन् । आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुंगाना र डिएसपी भोला रावलको सरुवा माग गरेका छन् ।
शुक्रबारको आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी मालेकी सांसद कमला विकले एक हप्ताभित्र सरकारले सरुवा नगरे थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइन् । नेकपा एमालेका नेता एवम् सांसद गोकर्ण विष्ट पनि शुक्रबारै जिल्ला सदरमुकाम आइपुगेका छन् । उता नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि तराई र पहाड़ छुट्याउनु पर्दछ भन्ने बिखण्डन बादी सोचका बिरुध्द जनता सडकमा उत्रेका हुन्, कोही भरौटेहरुले जनतामाथी दमन गर्ने चेस्टा नगर्नु भन्दै फेसबुक मार्फत खबर दारी गरेका छन् ।
के छ त अहिले गुल्मीको ताजा अवस्था? यसबारे जानकारी गराउन गुल्मीन्युज डट कमका बिशेष सम्बाददाता प्रेम सुनार गुल्मीन्युजसँग टेलिफोन संपर्कमा हुनुहुन्छ, सुनौ उहाँसँग गरिएको कुराकानी: